Malunga nathi-MEIXIN Umatshini wokubrusha uMatshini
Gxila kumatshini wokubrawuza oPhezulu weBrush ukusukela ngo-2003.
I-MeIXIN Ibrashi yoomatshini
IMeixin Comb Brush Ukwenza umatshini wokuvelisa uMatshini, Inkampani yethu ishishini lobugcisa obuphezulu esungulwe ngo-2004. Sakhethekile kuphando, ekuphuhliseni nasekuveliseni i-2-5 axis single (ephindwe kabini) yombala wokubrawuza umatshini, umatshini wokuchwetheza we-CNC kunye nomatshini wokuthunga, i-CNC Umatshini wokucoca indlu yangasese umatshini wokufrasha intloko, umatshini wokubraya ibrashi, umatshini wokusika ibrashi, ibrashi yokutsala kunye nomatshini wokuchela, njalo-njalo. Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwibrashi yemihla ngemihla, ibrashi yamazinyo yombane, ibrashi yokuhamba yamazinyo, iibrashi, ibrashi yesikhonkwane, ibrashi yokubrasha i-eyebrow, i-hair coup, i-hair stick, ibrashi yokuxubha, ibrashi yeenwele zomthi, i-BBQ wire brashi, uchungechunge lokucoca ngombane Imveliso yokubrashi ibrashi njlnjl. Singenza umatshini ngokweemfuno zabathengi.
Sineqela elinobuchule namava ophuhliso lobugcisa.
Bazimisele ukuyila kunye nokwenza iimveliso zombini kunye nemilinganiselo ebekiwe kunye neendlela ezicacisiweyo.Nangoku, sinobugcisa obuninzi bokuprinta umatshini wokuprinta, amandla uyilo olomeleleyo, kwaye siphucula inkqubo yenkonzo.
Ibrashi kunye nebrawu lomatshini ukwenza
Umzi-mveliso wethu ubalulekile ukuvelisa i-2 ukuya kwi-5 i-axis yombala enye (kabini) umatshini wokushicilela umbala, umatshini wokuchwetheza we-CNC, umatshini wokuchwetheza we-CNC, umatshini wokuchwetheza we-CNC kunye nomatshini wokudibanisa umatshini, iimatshini zokusika ifilim. isetyenziswa kakhulu kuzo zonke iintlobo iibrashi, umzekelo: umtshayelo (iplasitiki kunye neplani) yokucoca ibrashi, ibhrashi yamazinyo yombane, ibhrashi yokuhamba, ibrashi yokucoca, ibrashi yokupeyinta yomatshini, ibhulashi yomqengqelezi womatshini, ibrashi yokujikeleza, ibrashi yokuhlamba izitya, ibrashi, ibrashi yamaplanga kunye nokunye.
Umatshini wokubrasha iRoller owenziwe yi-MEIXIN wenza i-PZ- 22
[ Kule minyaka imbalwa idlulileyo, eyona nto iphambili ku-No.1 ibisoloko iyinkonzo yabathengi kunye nokwoneliseka kwabathengi. Senze kakhulu ukuphakamisa amanqanaba omgangatho kwaye sizama ukumisela inkqubo yolawulo lomgangatho wesandi kunye nenkqubo yokuqinisekisa.
Umatshini wokucoca i-Hockey bath Machine owenziwe yi-MEIXIN wenza i-PZ-16
Iimveliso zethu zigubungela ubungakanani obahlukeneyo boomatshini kwaye zithandwa phakathi abathengi ababonisa isikrini sekhompyuter, ibhola echanekileyo yokungenisa elizweni ye-TBI isikhafu kunye nolayini othe tye wesikhokelo sikaloliwe, i-servo motor, i-Italy brake motor njalo njalo Zonke iimveliso zethu kufuneka zihlolwe nge-100% ukuqinisekisa ukuba ukusebenza, ukuthembeka, ukhuseleko kunye nokuqina ngaphambi kokuthumela.
Umatshini weplastiki ongumngxuma weplastiki owenza umatshini
Ekuqaleni kuka-2017, iodolo yokuqala yomatshini wokubrashe ovela kumthengi wethu wasePakistan ufakwe ngempumelelo. Isendleleni eya kwezothutho. Iphakheji iqinile njengoko le mifanekiso ilandelayo ibonisa ukuthembisa ukhuseleko koomatshini.
Ngaba unayo imibuzo?
Ukusebenza ngomatshini we-Meixin Brush ngomatshini, uyasithemba, sikukhonza.